Logocloud: loharano maimaimpoana noforonin'ireo mpitsabo amin'ny fitenenana - Fiofanana kognitif
Logocloud: loharano maimaimpoana noforonin'ireo mpitsabo amin'ny fitenenana
Ianao izao: Home » Logocloud: loharano maimaimpoana noforonin'ireo mpitsabo amin'ny fitenenana
Ity pejy ity dia noforonina taorian'ny vonjy taitra COVID-19 izay mametra ny fahafaha-manome sy miditra amin'ireo fotoam-pitsaboana kabary. Ireo mpitsabo kabary hitanao voatanisa amin'ity pejy ity dia nizara tamim-pahalalahan-tanana ny fitaovan'izy ireo hahafahan'ny ankizy sy ny olon-dehibe hanana loharanom-pahalalana ao an-trano raha miandry ny famerenana ireo hetsika mahazatra izy ireo. Misaotra azy rehetra aho.
Ity pejy ity dia tsy ahitana ireo tranonkala izay nataoko, izay maimaimpoana maimaim-poana ao amin'ny GameCenter avy amin'ny TrainingCognitivo. Mba handefasana rohy mankany amina hetsika na fitaovana iray soraty amiko [email voaaro] mamaritra ny anaranao, ny lohatenin'ny hetsika ary ny famaritana fohy ho an'izay hampiasa azy. Zava-dehibe ny tsy ahitana sary na atiny arovan'ny zon'ny mpamorona. Hajaina ny matihanina mpiara-miasa, ny fitaovana voaray dia navoaka tsy misy fanovana avy amina tsipika.
Syllables, phonology ary metaphonology
Ampifandraiso ireo syllables by Elena Angelucci
Lazao amin'ny tonony ny teny voalohany ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Lazao amin'ny / f / alaivo ny teny ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Omeo anarana miaraka amin'ny / k / ny teny ary fantaro ny piozila (1) by Benedetta Ticozzelli
Omeo anarana miaraka amin'ny / k / ny teny ary fantaro ny piozila (2) by Benedetta Ticozzelli
Apetraho amin'ny consonant ny / l / + ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Apetraho amin'ny consonant / / r / + ireo teny ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Apetraho amin'ny / s / voalohany ny teny ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Apetraho amin'ny consonant / (1) ilay teny ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Apetraho amin'ny consonant / (2) ilay teny ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Lazao amin'ny / sz / teny ny teny ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Apetraho amin'ny / t / median ny teny ary fantaro ny piozila by Giorgia Zaghini
Lazao amin'ny teny voalohany / v / median ny teny ary fantaro ny piozila by Benedetta Ticozzelli
Fanavakavahana r / l by Alessandra Rocchi
Fanavakavahana Ski / Ci by Giulia Montagnese
Fanavakavahana t / d by Elena Angelucci
Aleo atao ny mofomamy (onomatopoeia) by Giulia Montagnese
Inona ilay vaninteny voalohany Nosoratan'i Alice Martinelli
Hoditra miaraka amin'ny C mamy eo amin'ny toerana afovoany by Giorgia Zaghini
Adala miaraka amin'ny afovoany T by Giorgia Zaghini
Fahatsiarovana ireo bisyllabel fisaka by Alessandra Rocchi
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny mamy c ao amin'ny laharana voalohany by Giorgia Zaghini
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny / k / by Benedetta Ticozzelli
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny / f / by Benedetta Ticozzelli
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny / s / voalohany by Monica Checchin
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny / s / + consonant by Sara Frizzarin
Fahatsiarovana ireo teny miaraka afovoany -ST- (1) by Roberta Benedetti
Fahatsiarovana ireo teny miaraka afovoany -ST- (2) by Roberta Benedetti
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny T- (1) by Giorgia Zaghini
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny T- (2) by Giorgia Zaghini
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny / ts / by Bendetta Ticozzelli
Fahatsiarovana ny syllables miaraka amin'ny S by Sara Frizzarin
Piozila teny amin'ny C C mamy by Giorgia Zaghini
Zahao ny sary consonant S + by Sara Frizzarin
Jereo ny sary consonant voalohany S + by Sara Frizzarin
Syllables miaraka amin'ny S (tadiavo ny sary miafina) by Sara Frizzarin
Manambatra teny miaraka amina fiantsoana mitovy Nosoratan'i Alice Martinelli
Omeo anarana ny / k / ny teny by Ambra Cravero
Lazao amin'ny teny / / / / a ny teny ary fantaro ny piozila by Serena Immovilli
Fahatsiarovana ireo teny miaraka amin'ny / tr / by Serena Immovilli
Sarotra miaraka amin'ny / g / by Maria Elisa Canale
Fahatsiarovana ireo teny miaraka sc by Maria Elisa Canale
Ampifandraiso amin'ny litera M by Valentina Piazzoli
Ampifandraiso amin'ny litera V ny vaninteny by Valentina Piazzoli
Ampifandraiso amin'ny litera L ny vaninteny by Valentina Piazzoli
Ampifandraiso amin'ny litera F ny vaninteny by Valentina Piazzoli
Ampifandraiso amin'ny litera N by Valentina Piazzoli
Famitana teny miaraka amin'ny tarika SP (Ben10) by Sara Manzi
Famitana teny miaraka amin'ny vondrona SP (Frozen) by Sara Manzi
Nomena tarehimarika misy / k / median (SpiderMan) by Sara Manzi
Fahatsiarovana syllable voalohany nosoratan'i Alice Fazzone
Alaharo ny tarehimarika manomboka amin'ny fomba mitovy nosoratan'i Alice Fazzone
Saripika mifanambady izay miafara amin'ny mitovy sy mitovy aminy nosoratan'i Alice Fazzone
Fahatsiarovana angano nosoratan'i Alice Fazzone
Fahatsiarovana farany syllable nosoratan'i Alice Fazzone
Piozila teny quadrisyllabic nosoratan'i Alice Fazzone
Adala miaraka amin'ny / r / nosoratan'i Alice Fazzone
Piozila misolelaka nosoratan'i Alice Fazzone
Teny piozila handrava nosoratan'i Alice Fazzone
Rhymes hanambady 1 nosoratan'i Alice Fazzone
Rhymes hanambady 2 nosoratan'i Alice Fazzone
Piozila SKI (toerana voalohany sy median) nataon'i Francesca Austoni
Memory SCI (toerana manomboka) nataon'i Francesca Austoni
Memory SCI (toerana voalohany sy median) nataon'i Francesca Austoni
Ny tantaran'ny sakafo maraina by Monica Checchin
Milamina ary lazao ny tantara "Hedgehog, squirrel and fly" avy amin'i Sara Frizzarin
Alamino indray ary tantarao ny tantara "The Tiffi lolo" by Sara Frizzarin
Tantara araka ny filaharana Nosoratan'i Alice Martinelli
Resaho indray ny fandaharam-potoana by Ambra Cravero
Famakiana sy fanoratana
Ampifanaraho amin'ny sary ny andianteny (1) nataon'i Alberto Mariotto
Ampifanaraho amin'ny sary ny andianteny (2) nataon'i Alberto Mariotto
Lahatsoratra iray by Alessandra Rocchi
Cloze (Henry Hart) by Alessandra Rocchi
Cloze 1 by Giulia Savio
Cloze 2 by Giulia Savio
Fanapahan-kevitra momba ny tsipelina by Alessandra Rocchi
Hangman'ny teny miaraka CH nataon'i Alberto Mariotto
Hangman'ny teny miaraka amin'ny CI-AK nataon'i Alberto Mariotto
Hangman ny teny miaraka amin'ny GL nataon'i Alberto Mariotto
Hangman'ny teny miaraka amin'ny GN nataon'i Alberto Mariotto
Hangman'ny teny miaraka amin'ny SC nataon'i Alberto Mariotto
Andao hamaky… GH / CH by Elena Angelucci
Mitadiava tsiro / sary tsara nataon'i Alberto Mariotto
Fanavakavahana CI / GI by Giulia Groppelli
Hifangaro teny sy sary Nosoratan'i Alice Martinelli
Ny fanavakavahana ny teny miaraka amin'ny V sy F Nosoratan'i Alice Martinelli
Vakio ny fehezanteny ary ampifandraiso amin'ny sary mety Nosoratan'i Alice Martinelli
Teny crossword miaraka amin'ny tetezana taratasy by Claudia Fusari
Cloze amin'ny gn / gl by Roberta Marracino
Cloze adjectives by Roberta Marracino
Ny fahazoana fehezanteny by Diego Abenante
Sokajy sy ny semantika
Fanasokajiana ny voninkazo, fitaovana ary sakafo by Alessandra Rocchi
Aleo izany ho marina by Elena Angelucci
Loko mifanandrify sy anarana by Ambra Cravero
Alaharo indray ny biby manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny bitika by Ambra Cravero
Fanasokajiana sakafo mamy sy matsiro by Ambra Cravero
Order kitapo (vola madinika) by Serena Immovilli
Order kitapo (vola madinika sy vola taratasy) by Serena Immovilli
Azoko vidina ve ny € 2,5? by Serena Immovilli
fitoeran by Diletta Ruggeroni
Lalao anaty sy ivelany by Diletta Ruggeroni
Tsy manisa! by Elena Angelucci
Hodinihina amin'ny latabatra fitomboana by Giorgia Zaghini
Izahay dia manome isa 1 ka hatramin'ny 5 nataon'i Alberto Mariotto
Izahay dia manome isa 1 ka hatramin'ny 10 nataon'i Alberto Mariotto
Latsaka sa mihoatra ny euro? by Serena Immovilli
Na kely kokoa? (1) by Serena Immovilli
Na kely kokoa? (2) by Serena Immovilli
Sehatra sy fotoana
Mitadiava fe-potoana mitovy (tolakandro) nataon'i Serena Immovilli
Mitadiava fe-potoana mitovy (maraina) by Serena Immovilli
Amin'ny firy izao? by Serena Immovilli
Ny fanandramana sy ny famokarana tsiroaroa S / T kely indrindra
Mpanoratra: Elena Campana
Link: Download avy amin'ny Drive
Fanazarana fanavakavahana fonenana
Mpanoratra: Francesco Petriglia
Ahoana ny fampiasana azy: Ao anatin'ireto fampihetseham-batana ireto dia ampifandraisina amin'ny loko sy ny toetra ny feo tsirairay. Ny andraikitry ny zaza dia ny mamantatra raha mifanaraka amin'ny toetra voalohany na faharoa ilay feo tononin'ny olon-dehibe. Ohatra, isaky ny manonona ny vaninteny SA ny olon-dehibe dia tsy maintsy manondro ilay faribolana maitso eo an-tampon'ny efijery ny zaza mba hampandroso ny toetra amam-panahy. Raha manonona ny FA kosa ny olon-dehibe, dia tsy maintsy manondro ilay faribolana volomparasy ilay zaza. Azonao atao ny mamadika ny anjara asany amin'ny fangatahana ilay zaza hamoaka ny vaninteny marina, fa ilay olon-dehibe kosa tsy maintsy maminavina izay feo henony.
Fitaovana ho an'ny fanavakavahana t / k
Mpanoratra: Alice Sordi
Lalao goose CA / CIA voalohany
Mpanoratra: Federica Ciceri
Lalao gisa CA / CIA afovoany
Semantika - Inona no mpiditra an-tsokosoko
Mpanoratra: Debora Bibiano
Semantika - fitoviana sy fahasamihafana
Mitadiava ireo teny miaraka amin'ny and
Mpanoratra: Priscilla Malhamè
Manaova sarin-teny amin'ny and
Manonona teny amin'ny lahatsoratra
Fanavakavahana s / ts
Mpanoratra: Bruna Agostinis
Famaritana: aorian'ny fampifangaroana ny feo / s / amin'ilay bibilava sy ny feo / ts / amin'ny hety dia atombohy ny fampisehoana, kitiho ny zana-tsipika ankavanana ary henoy ny feo na ny silabatra ary angataho ny zaza hikasika ilay bibilava na ilay hety a arakaraka ny feo re, dia hihetsika ihany ny sary mifanaraka aminy rehefa tsindrio azy amin'ny totozy.
/ v / amin'ny vaninteny sy anaram-piangonana
Famaritana: manomboka ny fanolorana, manindry ny zana-tsipìka no mahatonga ny sambo hifindra ary amin'ny fotoana mitovy dia manambatra ny phoneme / v / maharitra amin'ny voady; fanindriana ny zana-tsipìka, sary noheverina fa nomena anarana hoe ny feo nikendry.
Feo onomatopoeic feo
Famaritana: manomboka ny fanolorana, tsindrio ny biby tsirairay dia handre ny andininy tsirairay avy.
Fahatakarana leksika - fandaniana
Famaritana: atombohy ny fampisehoana, angataho ny zaza hikasika sakafo amin'ny famakiana eo ankavanan'ny ambony, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny zana-tsipìka dia hiditra ao anaty sarety ny sakafo.
Jereo ny miditra an-tsehatra
Famaritana: atombohy ny fampisehoana ary angataho ny zaza hikasika ilay niditra an-tsokosoko, ny sary mety dia hihetsika ihany rehefa tsindrio eo aminy miaraka amin'ny totozy isika.
Famaritana: atombohy ny fampisehoana ary angataho ny zaza hikasika ilay sary izay manomboka eo amin'ilay eo afovoany, rehefa mikasika ilay sary mety ilay zaza dia tsindrio ny zana-tsipìka eo ankavanana mba hitondrany ny fanamafisana.
Famaritana: atombohy ny famelabelarana ary vakio ny vaninteny, angataho ny ankizy hikasika ilay sary izay manomboka amin'io vanin-teny io, rehefa mikasika ilay sary mety ilay zaza, tsindrio ny zana-tsipìka eo ankavanana mba hitondra ny fanamafisana.
Hevitra momba ny habaka: Aiza izany?
Famaritana: amin'ireo ppt rehetra ireo amin'ny sary mihetsika voalohany dia azonao atao ny manontany an'ilay zaza hoe "aiza X?", Rehefa mamaly ny zaza (ohatra "ao anaty harona"), amin'ny alàlan'ny fanindriana ny zana-tsipìka eo ankavanana dia miseho ny sary (ohatra ny harona) ary, manindry indray dia miseho ny fanamafisana.
Amin'ny slide farany, etsy ankilany, azo atao ny manentana ny fandrafetana fehezanteny tsotra nitarina miaraka amin'ny fanampian'ny andian-teny: azonao atao ny manontany an'ilay zaza hoe "inona no mitranga?" ny fanindriana ny zana-tsipìka eo ankavanana dia hiseho singa iray amin'ilay fehezanteny iray isaky ny mandeha.
Link: Lontano - In - Sotto - On - akaiky
Avy aiza no alehany?
Mpanoratra: Veronica Marrocu
Famaritana: Amin'ity fanatanjahan-tena tsotra ity dia asaina manonona ny sary eo ambony ny zaza ary, raha vao nomena anarana dia asainy misafidy ny harona marina (voankazo na legioma?).
Link: Misintona amin'ny fiara
Biby: fisehoana maso sy fihainoana
Mpanoratra: Greta Caligaris
Famaritana: ao anaty rakitra
Lalao eny ary tsia
Mpanoratra: Elena Minno
Lalao metaphonological an'ny gisa
Famaritana: Amin'ity lalao tsotra amin'ny gisa ity dia ny fitsipika no mahazatra.
Raha hilalao dia mila apetrakao ao anaty maody fampisehoana. Amin'ny alàlan'ny fikajianao ny isan'ny boaty ahatongavanao dia halefa ho azy eo amin'ny slide ianao miaraka amin'ilay fampiharana tokony hatao. Ny fampihetseham-batana tsirairay dia manana sary mihetsika izay ahetsika rehefa kitihina ny totozy.
Warning. Mila mizaha aloha ny fampandehanana ianao satria raha manindry ny totozy matetika loatra ianao, dia miafara amin'ny fisehoan-javatra manaraka.
Mba hiverenana amin'ny efijery miaraka amin'ilay lalana, tsindrio fotsiny ilay kisary Minnie Mouse eo ambany.
Fomba kely ary lasa tsotra daholo ny zava-drehetra 🙂
Ny lesoka ihany .. tsy misy kitapo fa ... mampiofana ny fahatsiarovana izahay amin'ny fangatahana ilay zaza hahatadidy ny toerana misy azy !!
Fametrahana / consonant / s / + amin'ny toerana afovoany
Mpanoratra: Gloria Bimbi
Famolavolana / / / amin'ny toerana voalohany
Mpanoratra: Alessandra Scafasci
Andalana miaraka amin'ny teny bisyllabika
Mpanoratra: Cecilia Saioni sy Chiara Gordiani
Mpanoratra: Sara Ravasio
TD misy tsiroaroa kely
Mpanoratra: Cecilia Saioni
Tsiroaroa kely / t / - / k /
Mpanoratra: Rosaroberta Marini
Ny zava-niainan'ny bibilava eny amin'ny habakabaka - / sp / intervocalica
Mpanoratra: Chiara D'Alessandro
Tantaran'ny / k / e / ts /
Mpanoratra: Federica Demurtas
Famaritana: atombohy ny fampisehoana. Ny teny aza miverina amin'ny loko mena fotsiny ny zaza, avy eo tsindrio indray mandeha ary antenaina hitranga ilay sary mihetsika
Fankatoavana ny tononkalo
Mpanoratra: Simona Corsi
Andian-teny miady: tsy maintsy mameno ilay fehezanteny ny mpilalao amin'ny famoronana rhyme
Rhymes voafantina eo anelanelan'ny safidy roa: ny mpilalao dia tsy maintsy manaiky, mifidy eo amin'ny safidy roa, ny teny hoe rima
Link: Tokony homarinana avy amin'ny hirahiran'ankizy Rhymes voafantina eo anelanelan'ny safidy roa
Fanavakavahana / m / and / n / tsiroaroa kely
Mpanoratra: Martina Lazzari
Bingo miaraka amin'ny / v / voalohany
Bingo miaraka amin'ireo ponenana samihafa
Mpanoratra: Claudia Morassutti
Manomboka amin'ny ... syllable voalohany MA-SA
Mpanoratra: Veronica Viti
Hevitra Topolojika - aiza i Dade sy Lili
Mpanoratra: Davide Mongelli sy Linda Bottura
Fanavakavahana m / n
Fanavakavahana r / l
Lalao goose miaraka amin'ny / k / mediana
Mpanoratra: Lucia Botti
Sokajy: voankazo sy legioma
Mpanoratra: Greta Calligaris
Link: Milalao an-tsokosoko
Fanavakavahana amin'ny teny-dierse mitovy
Famaritana: Raha mitovy ny teny dia vantany vao mamaly tsara ny zaza dia tsindrio fotsiny ny bara habaka ary hifindra ny mpivady mitovy aminy, raha tsy mitovy ny teny dia tsindrio ny zana-tsipìka ankavanana. Rehefa manakaiky ilay harona ny iray amin'ireo mpivady roa dia hiseho ilay teny hoe "tena tsara".
Fahatsiarovana mizara phoneme
Lalao momba angano
Mpanoratra: Dora Ghidelli
Tantara hametrahana ny / k /
Tantara ara-tsosialy sy fihetseham-po
Alana sy ny voina
Mpanoratra: Giulia Montagnese
Fihetseham-po sy toe-tsaina
Mpanoratra: Elisa Tosi
Hood Red Riding Little any CAA
Mpanoratra: Manuela De Santis
Link: Jereo ny YouTube ao amin'ny YouTube
Biby: fampidirana marika
Mpanoratra: Alice Marotta
Fomba fampiasana azy: mamela anao hampiofana ny fitadidianao ny rakitra ambaratonga teny. Ny fanazaran-tena dia ny fitadidiana ireo teny vakiana sy famerimberenana mafy azy ireo, aorian'ny fanentanana maromaro (1 na 2), rehefa lasa mavo sy foana ilay efamira. Raha te hampiasa ilay rakitra dia apetraho amin'ny fampisehoana ary avy eo amin'ny totozy na ny bara habaka dia ataovy mandroso ny slide. Ny teboka herinaratra dia azo ovaina, efa misy lisitra 4 miaraka amin'ny sakan'ny 1 ary ny iray manana ny halavan'ny 2, ampidiro fotsiny ireo teny vaovao ao amin'ny efajoro
Link: Span of 1 Span of 2
Latabatra fahatsiarovana miasa (4 syllables)
Ahoana no fampiasana azy: Amin'ny alàlan'ny fanolorany ny latabatra syllable, ny ankizy dia asaina hanao tsianjery ireo syllables sy ny toerany. Amin'ny fanesorana ny latabatra syllable ary manolotra ny latabatra amin'ny làlana, ny zaza dia tsy maintsy manonona ireo vaninteny izay manatrika ilay lalana.
Karatra fihenjana stroop
Ahoana no fampiasana azy: Karatra ho an'ny hetsika fanonona anarana haingana, fa amin'ny fomba stroop
Lalao zana-tsipika miakatra / midina
Famaritana: ny fanazaran-tena dia ny PASAT: amin'ny maody fampisehoana dia angatahina ianao hahatadidy ny isa hita teo aloha ary hanampy izany amin'ny iray ianao
mijery. Ho an'ny ankizy efa za-draharaha amin'ity fampihetseham-batana ity, ny loko dia mamela anao hanasarotra ilay asa, ohatra:
ny fihetsika iray dia mifanandrify amin'ny loko iray;
ny fiovan'ny fandidiana dia mifanaraka amin'ny loko iray (ohatra amin'ny + ka hatramin'ny x)
Famaritana: angatahina ianao hanome anarana ny tarehimarika raha fotsy ny taratasy, raha ilaina kosa ny lokon'ny taratasy raha miloko izany. Ho an'ny ankizy za-draharaha kokoa, ny loko dia azo ampifandraisina amin'ny fitsipika iray (oh: "mitehafa tanana rehefa misy mena", na "aza miteny na inona na inona rehefa misy mavo").
Manelingelina ny mpitsabo amin'ny fitenenana ve isika ?!
Famaritana: fitaovana iray hiasa miaraka amin'ny:
- fanitarana fehezanteny
- filaharana ara-nofo
- lexicon in output
Ny lynx - lalao fijerena sary
Description: Ampidino ny torolàlana
Tandremo ny filaharan'ireo endrika sy loko
Famaritana: fampisehoana teboka herinaratra misy hetsika maromaro mifandimby natao hanentanana ny fahatsiarovana, sary an-tsaina, fiheverana. Ny marary dia angatahina haka sary an-tsaina sy hitadidy ny filaharana sy ny toerana misy ny loko sy ny endrika. Aorian'ny fampisehoana ny filaharana tsirairay dia angatahina ny marary hanao hetsika. Aorian'ny fanatanterahana izay angatahina dia angatahina mba hamoaka am-bava ny filaharan'ny loko / endrika naseho teo aloha, manaraka ny mason-tsivana nomena.
Fampahatsiahivana sy fandinihana sary
Author: Arianna Chiorri sy i Ilaria Mangino
Mizara ho ambaratonga 3 ny fitomboan'ny fahasarotana ny asa.
Amin'ny ambaratonga voalohany dia hatolotra karatra roa ilay zaza: ny karatra tsirairay dia misy biby, loko ary isa iray. Ny fampisehoana ireo karatra dia haharitra 5 segondra ary ny zaza dia tsy maintsy hanao tsianjery afa-tsy ny isa sy ny biby amin'ireo karatra roa ireo. Aorian'ny fampirantiana dia angatahina ianao hampatsiahy na ny isa na ilay biby.
Amin'ny ambaratonga faharoa dia tsy maintsy tsarovan'ny ankizy ihany koa ny lokon'ny karatra tsirairay.
Farany, amin'ny ambaratonga fahatelo, ankoatry ny fanaovana tsianjery ny isa, ny biby ary ny lokon'ny karatra tsirairay dia tsy maintsy mitandrina ny zaza satria hiseho ireo mpanelingelina mandritra ny fiparitahan'ny karatra.
Mamaky syllables sy teny miaraka amin'ny phoneme / k /
Mamaky syllables sy teny miaraka amin'ny phoneme / v /
Lalao: tsiranoka misy phoneme /ʃ /.
Famakiana syllables, teny ary phonemes miaraka amin'ny / s /, / ts / and / dz /
Fankatoavana ny vaninteny voalohany
Famaritana ny sary + fanoratana matoanteny
Fanoratana fonja / grapheme
Mpanoratra: Giulia Delfino
Mpanoratra: Sara Jane Raffaello
Famaritana: ny zaza mahita ny sary ary tsy maintsy manoratra ny teny marina, avy hatrany avy eo dia manana hevitra an-tsary hanamarina ny maha-marina ny valiny
Link: CG Digrams sy Trigrams Sarin'ny PB
Fanapahan-kevitra momba ny tsipelina
Link: CG Digrams sy Trigrams Fanapaha-kevitry ny fanoratana PB
Vondrona vondrona konsonantaly
Mpanoratra: Chiara Campana
Fanapahan-kevitra fanoratana an'i Pac-man
Link: Milalao an-tserasera
Famakiana sy fifankahazoana: Baolina
Famaritana ny sary miaraka amin'ny fanohanana ara-maso sy fanamarinana
Karatra hamakiana haingana haingana
Mpanoratra: Elena Mattesini
Ahoana ny fampiasana azy: Ny tanjona dia ny famakiana haingana ny habetsaky ny folo, ny fahatsiarovana ireo modely izay avy eo dia ny fahatsiarovana ny zava-misy voalohany amin'ny 10. Raha toa ka misy pirinty ny pirinty, ny lalao dia afaka noforonina foana miaraka amin'ny tanjona hiaraha-miasa amin'ny nataon'i 10.
Manaova lalao laharana
Rubamazzo miaraka amin'ny isa 10
Piozila Times Times (latabatra in-8)
Description: Modely fampiofanana kognitif
Manaiky ny tsangambato hosodoko / tsangambato
Link: Fantatro ilay sary hosodoko Manaiky ny tsangambato
Fitaovana nataon'i Adriana Romano
Mpanoratra: Adriana Romano
Famaritana: ity lahatahiry ity dia misy fitaovana samihafa noforonin'ilay mpitsabo Adriana Romano. Ho hitanao manokana hoe:
Sary hatao karatra
Famakiana ho an'ny phoneme
Karatra kely misy ambany indrindra
Fitaovana amin'ny alàlan'ny anaram-piangonana
Ny toekaren'i Bing